शवदाह गृहको ताल्चा फोडेर संक्रमितको अन्त्येष्टि – Kantipur Hotline
काठमाडौ जेठ १७, कलेजोको बिरामी ५६ वर्षीय पुरुषको बुधबार साँझ ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेजमा मृत्यु भयो । कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको रिपोर्ट पनि आयो । अब प्रहरी प्रशासनलाई फसाद पर्‍यो– शवको व्यवस्थापन कसरी गर्ने † यही अन्योलका कारण शव रातभर अस्पतालमै रह्यो । भोलिपल्ट पनि दिनभरि शव उठेन । बिहीबार पौने ५ बजे बल्ल शव अस्पतालबाट निकालियो ।
राजदल गणका कर्णेल उत्तम सापकोटा र महानगरीय प्रहरी वृत्त सातदोबाटोका प्रहरी नायब उपरीक्षक मित्रबन्धु शर्माको टोलीले शव एस्कर्टिङ गरेर ६ बजे पशुपतिस्थित विद्युतीय शवदाह गृहमा पुर्‍यायो । तर, शवदाह गृहमा ताल्चा लगाइएको थियो । साँझ ७ बजेसम्म ड्युटी गर्नुपर्ने कर्मचारी कोरोनाले मृत्यु भएका व्यक्तिको शव ल्याउने खबर पाएपछि ६ बजेअघि नै ताल्चा लगाएर निस्किसकेका थिए ।
शव अन्त्येष्टि गर्न डराएर भाग्ने चार जनालाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको सदस्यसचिव ढकालले बताए । यसमा शाखा अधिकृत, खरिदार, इलेक्ट्रिसियन र कार्यालय सहयोगी छन् । ‘उनीहरूले आफ्नो ड्युटीको समय पूरा नगरी भागेकाले कारबाही हुन्छ,’ उनले भने । विद्युतीय शवदाह गृहमा शव व्यवस्थापन गर्न ६ जना कर्मचारी छन् । आठरआठ घण्टाको ड्युटी समय निर्धारण गरेर दुईरदुई जना खटाइएको छ । दुई जनामध्ये एक जना ट्रली ठेल्ने, शव राखेको बाँसको खट मिलाउने र एक जना स्वीच थिच्ने इलेक्ट्रिसियन हुन्छन् । शव अन्त्येष्टिमा संलग्न दुई जना पुनस् क्वारेन्टाइनमै फर्केको खवर कान्तिपुर दैनिकमा मकर श्रेष्ठको वाइ लाइनमा प्रकाशित रहेको छ ।
शव वाहन नपाएर ट्रकमा : आइतबार अस्पताल भर्ना भएका यी पुरुषको सोमबार कोरोना परीक्षण गर्न स्वाब निकालिएको थियो । मृत्युपछि उनको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो । मृत्यु भएलगत्तै पनि उनको अन्त्येष्टि हुन सकेन । अन्त्येष्टि कसले गर्ने ? कहाँ गर्ने ? कुन गाडीमा लैजाने ? ललितपुरका प्रहरी प्रशासनले निर्णय लिनै सकेन । ‘उपत्यकामा पहिलो घटना भएकाले व्यवस्थापन गर्न केही समय लागेको हो,’ ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले भने ।
कार्यविधिअनुसार शवलाई चाँडोभन्दा चाँडो अन्तिम संस्कार गर्ने स्थलमा पुर्‍याउनुपर्छ । शव लिन जानुपूर्व शव वाहनका चालक तथा कर्मचारीले पीपीई प्रयोग गर्नुपर्दछ । शवलाई अस्पताल वा घरबाट अन्तिम संस्कार गर्न लैजाने क्रममा अस्पतालका कर्मचारी, एम्बुलेन्सका कर्मचारी, सद्गत गर्ने व्यक्तिहरू र सद्गतमा सहभागी हुने मृतकका आफन्तजनले पन्जा, चस्मा, टोपी, मास्कसहितको पीपीईको प्रयोग गर्नुपर्छ । शवलाई कमभन्दा कम व्यक्तिले मात्रै छुने र शवमा लागेका पाइप, केथेटरलगायतका सामग्री हटाउनुपर्छ । शवको कुनै भागबाट रगत बगेको भए त्यस भागलाई होसियारीपूर्वक बन्द गरेर सुरक्षित हुनुपर्छ । कार्यविधिमा उल्लेख गरिएअनुसार शव अन्तिम संस्कार गर्ने स्थलतर्फ लैजान साधारण शव वाहनको प्रयोग गर्न सकिनेछ । त्यसैगरी मृतकको आफन्तले शव हेर्न चाहेमा शवलाई नछोइकन कम्तीमा एक मिटर टाढाबाट पालैपालो एकरएक जनाले शव हेर्न सक्नेछन् ।